I-O2 inyusa isantya sefayibha ukuya kwi-600 Mb symmetric simahla | Iindaba zeGajethi
Asikuqhelanga ukukunika olu hlobo lweendaba, ayiqhelekanga kwiinkampani zomnxeba ukuthatha isigqibo sokwandisa umgangatho okanye ubungakanani benkonzo ngendlela engenamdla kwaphela, kwaye iyavakala, kufuneka sikhumbule ukuba ezantsi ziinkampani kwaye kufuneka ziphumelele okuthile. Nangona kunjalo, ukufika kwe-O2 eSpain ngesandla seTelefonica kubonakala ngathi kuguqula yonke into esayiqondayo malunga nenkampani yonxibelelwano. Ngoku ngaphandle kwesaziso sangaphambili, i-O2 ithathe isigqibo sokuphinda kabini isantya sabathengi bayo ngaphandle kweendleko kwaye kwangoko.
Utshintsho izakuqala ukufikelela kubathengi be-O2 ubusuku bonke ukusuka ngoFebruwari 17 ukuya kuFebruwari 18, kwaye iya kuba nenkqubela phambili, ke kuya kufuneka ungoyiki xa ubona ukuba kuthatha ixesha elide kunesiqhelo. Nangona kunjalo, kwaye uthathele ingqalelo ukusebenza kwe-O2 ukuza kuthi ga ngoku, kuya kufuneka ube ne-600 Mb symmetric kumgca wakho ngomhla we-18.
Olu lutshintsho olucacileyo kwaye, ewe, aluchaphazeli amaxabiso ezinga lakho, eliya kuhlala linje ngokuhlala kunjalo (...) Siza kuqala ukwenza oku kunyuka kwesantya ngomso kwaye siya kuthunyelwa ngokuqhubekayo kubo bonke abathengi, kwinkqubo enokuthi ihlale phakathi kweveki enye ukuya kwezintathu (…) Ngezizathu zomthetho, awuyi kulubona utshintsho kwisantya esiboniswe kwimeko yesivumelwano sakho kude kube nge-18 kaMatshi.
Olu phuculo aluthethi nakuphi na ukunyuka kwexabiso kwaye izakuphinda kabini i-Mb Mb yangaphambili yabaxumi ukuya kwi-300 Mb yangoku. Ayiloxesha lokuqala ukuba i-O2 ihambe ngoluhlobo, siyakhumbula ukuba ekumiselweni kwayo imigca yayo yayine-100 Mb symmetrical, nangona abo basebenzisi babenandipha ukunxibelelana neMovistar enkulu kune-100 Mb baqhubeka nokuyigcina, Ucinga ukuba esi santya simahla sonyusa ntoni?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » I-O2 inyusa isantya sefayibha ukuya kwi-600 Mb symmetric simahla